प्रेस युनियन सुनसरीमा अधिकारी र पुरीको जुहारी, पर्दापछाडिको खेलाडी को ? - Purbeli News
प्रेस युनियन सुनसरीमा अधिकारी र पुरीको जुहारी, पर्दापछाडिको खेलाडी को ?
प्रकाशित मिति: शनिबार, कार्तिक १७, २०७५ समय: ८:१६:०५
सुनसरी । प्रेस युनियन सुनसरीको आँठौ जिल्ला अधिबेशनको बन्द सत्र स्थगित भएपछि माहोल थप गर्माएको छ । कार्तिक १५ गतेको अधिबेशनको बन्दसत्र स्थगित भएपछि १८ गते आईतबारका लागी निर्बाचन तोकिएको छ । अध्यक्षका लागी दाबेदार पवन अधिकारी र धनबहादुर पुरीबिच चुनावी सरगर्मी बढेको छ । एकले अर्कालाई कमजोर देखाउने रणनीतिमा दुबै जना उत्रिएका छन । प्यानलमा बिभाजित प्रेस युनियन सुनसरीमा दुईजनाको जुुहारी चलेपछि तेस्रो ब्यत्तिलाई समेत अघि सारिएको छ । चुनावमा एकले अर्कोलाई कमजोर देखाऊन श्रमजीवि र कलमजीविको नारालाई समेत अघि सारिएको छ । एकले अर्कालाई आफु असली कलमजीवि भएको दाबी गरिरहेका छन ।
खासमा को चाँहि कलमजीवि ?
नेपाली पत्रकारितालाई हेर्ने हो भने कलम मात्र चलाएर बाँचेका एकदमै कम पत्रकारहरु रहेका छन । उनीहरु बिभिन्न पेशा र ब्यबसायमा पनि आबद्ध रहेका छन । पत्रकारिताबाट मात्र आर्थिक सम्बद्धि सम्भव नभईसकेको अबस्थामा केही बाहेक पत्रकारहरु बिभिन्न पेशा र ब्यबसाय गरिरहेका छन । प्रेस युनियन सुनसरीको हकमा अधिकारी पत्रकारिताका अलावा एजेन्सी सञ्चालन गरिरहेका छन । पुरी पनि पत्रकारिताका अलावा गाई फार्म लगायत आय आर्जनको ब्यबसायमै संलग्न छन । पुरी पनि समाचार लेख्छन र अधिकारी पनि समाचार लेख्छन ।
अब एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेर असली श्रमजीवि र कलमजीवि भन्नुपर्ने अबस्था कहाँ छ ? कुने पनि संघ संगठनको नेतृत्व गर्न सक्षम ब्यत्तिले दाबी गर्ने हो । सुनसरीको हकमा दुबै ब्यत्ति सक्षम छन । निर्बाचनमा गएपछि मतपरिणामले देखाउने कुरामा किन गलफत्ति ? एकै ठाँउका बाँच्दाका जन्ति र मर्दाका मलामी अधिकारी र पुरीको यो प्रतिष्पर्धा स्वस्थ्य हुनु जरुरी छ । एकले अर्काको सम्मान गरेर उदाहरणीय बनेर देखाउने बेला आएको छ । ताकी अफवाह फैलाएर माहोल आफनो पक्षमा पार्नु दुबैका लागी भुल हुने छ ।
राजधानीका बिभिन्न दैनिक पत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनमा समेत अनुभव बटुलेका अधिकारी प्यावसन सुनसरीका सदस्य, बिज्ञापन संघका केन्द्रिय सदस्य,लगायत बिभिन्न संघसंस्थामा आबद्ध भएर क्रियाशिल रहेका छन । पुरी पुर्बको एक चर्चित दैनिक पत्रिकामा काम गर्छन । उनी पनि बिभिन्न संघसंस्थामा आबद्ध रहेका छन ।
रातारात युनियनको सदस्यबाट किन हटाईयो दाहालको नाम ?
अध्यक्षमा दुई पक्षको जुहारी चलिरहेका बेला दुबै पक्षले दाहाललाई उपाध्यक्ष, सहसचिब र नभए कोषाध्यक्षको आश्वासन दिएका थिए । सुरेश चन्द्र दाहाल अध्यक्षका दाबेदार दुबैजना सँग उत्तिकै नजिक छन । केहीलाई भ्रम थियो कि दाहाल पबन अधिकारीका निकट पात्र हुन । उनीसँग सुनसरीका दर्जनौ युनियन समर्थक पत्रकारहरु नजिक छन ।
उनले अधिकारीलाई सहयोग गर्छन भन्ने बुझेका केही ब्यत्तिहरुले दाहाल र अधिकारी बिच फाटो ल्याउनका लागी र आफनो पक्षमा माहोल सिर्जना गर्नका लागी यो खेल खेलेको बुझ्न गाह्रो छैन । अर्कोतर्फ दाहाललाई माईनस गर्न पाए आफु हिरो हुने दाउमा लागेको केही ब्यत्तिको निच स्वार्थका कारण पनि यो खेल भएको बुझिन्छ ।
दाहाललाई निर्बाचित गराउँदा वा प्रदेशमा लैजाँदा भोलि आफुलाई अप्ठयारो पर्ने र मतदातालाई भाँडने बुझेका केहीले आफनो स्वार्थका लागी यो खेल खेलेको स्रोत बताउँछ ।
कस्ले खेलिरहेको छ घिलाग्दो खेल ?
प्रेस युनियन सुनसरीको निर्बाचनमा धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरुको कमी देखिएको छैन । मिलाएर लैजाने भन्दा पनि दुई पक्षलाई भिडाएर आफु फाईदा लिने खेल भईरहेको छ । दुई पक्षलाई उठाएर तेस्रो ब्यत्तिलाई उम्मेदवार बनाउने ब्यक्ती पर्दा उघ्रिसकेको छ ।
पुराना सदस्यहरुको नाम कटाएर अधिबेशन भाँडने खेलमा लागेकाहरुले भोली आफु चुनावमा उठदा उनीहरुले कुन हदसम्मको खेल खेल्छन त्यो पनि सोच्नु जरुरी छ । कस्ले सदस्यको नाम कटायो, कस्ले कुचकारको नाम सिफारिश गर्यो, र कस्ले फोहरी खेल खेलिरहेको छ सबै कुरा उदांगो भईसकेको छ । अब प्रेस युनियन सुनसरीका अग्रज र शुभचिन्तकहरुले यो खेलको अन्त्य गरी सौहार्दपुर्ण बाताबरणमा निर्बाचन सम्पन्न गराउने बेला भएको छ । यो अबसर पनि हो यसलाई सबैले सदुपयोग गरौँ ।